Mmetụta okpomọkụ maka ngwaahịa ngwaahịa SMC
The okpomọkụ mgbanwe n'oge ịkpụzi usoro nke FRP bụ ihe mgbagwoju anya. Ebe ọ bụ na plastik bụ onye nduzi na-adịghị mma nke okpomọkụ, ọdịiche dị n'etiti etiti na nsọtụ nke ihe a buru ibu na mbido ịkpụzi, nke ga - eme ka ọgwụgwọ na njikọta njikọ ghara ịdị ...
SMC mkpuchi akụkụ ụgbọala nwere uru nke nkwụsị nkwụsị, ịka nká, nhicha dị mfe, ịdị arọ dị mfe, modulus na-agbanwe agbanwe, wdg, ma bụrụ nhọrọ kachasị mma maka akụkụ mkpuchi ụgbọ ala. Automobile ekpuchi akụkụ (nke a na-akpọ ugbu a dị ka akụkụ mkpuchi) na-ezo aka na ụgbọala ...
Nyocha nke isi nsogbu na ngwọta nke efere kpo oku eletrik: 1. Igwe ọkụ nke kpo oku na-enweghị ike iru ihe a chọrọ. Na-aga n'ihu mma nke ugbu a usoro, na ngwá ike izute ngwaahịa ịkpụzi chọrọ; b. Otu kpo oku ...
ZHENGXI ga - esonye n’ihe ngosi a na 02/09 / 2020-04 / 09/2020, nabata ileta ụlọ ntu anyị A1327. "China International mejupụtara Materials Ngosi" bụ ndị kasị ibu na kasị akpa ọtụtụ ihe mejupụtara ihe ọkachamara technology technology na Asia-Pacific mpaghara. Ebe ọ bụ na ya ...
ZHENGXI SMC Water Tank Nkedo Production Line Start Na Yaan
Mmiri mmiri SMC bụ ụdị mmiri mmiri ọhụrụ eji mba ụwa. Ọ na-agbakọta site na mkpokọta nnukwu tank SMC tank tank. Ejiri iji resin nri-nri, yabụ ogo mmiri dị mma, na-enweghị ntụpọ; o nwere njirimara nke ike dị elu, ịdị arọ dị arọ ...
Ngwa SMC BMC
Akwụkwọ ntuziaka a na-akọwa kọwaa mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ (SMC) na Nnukwu Molding Compound (BMC), ihe mejupụtara ha, njirimara ha, nhazi ha, ojiji ha na mmegharị ha. A na-atụ aro maka otu esi enweta nsonaazụ kacha mma yana otu esi bulie elele nke uru ndị a pụrụ iche ...
Ngwongwo ihe osise a dị omimi bụ usoro na-arụ ọrụ (akụkụ ịpị) nke ọdịdị na ogo achọrọ site na itinye ikike mpụga na efere, warara, ọkpọkọ, profaịlụ, na ihe ndị yiri ya site na pịa na ịnwụ (ebu) ime ka nrụrụ plastik ma ọ bụ nkewa. Stamping na ibe ya bụrụ t ...